Canug 6-12 sano jir | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / In waalid la ahaado / Canug 6-12 sano jir
Gabadh yar oo eegaysa kamarad oo xagga hore laga arko, saddex caruur ah ayaa ka muuqda xagga dambe.
Carruurtu siyaabo kala duwan ayey horuumar u sameeyaan. Waxaad la xiriiri kartaa daryeelka caafimaadka dugsiyada haddii aad taageero u baahantihid ama aad qabtid su'aalo ku aaddan horuumarka canuggaaga.
Fasalka barbaarinta waa nidaam iskool oo waajib ah. Caruurta badankoodu waxay dhigtaan fasalka barbaarinta laga bilaabo bilowga sanad dugsiyeedka ay buuxinayaan 6 sano. Waxbarashadan waa inay dar-dargeliso caruurta horumarkooda una diyaariso waxbarasho sii socota. Fasalka dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurtu waa lacag la'aan, waxaana uu leeyahay qeyb weyn oo shaqo hal abuurnimo ah iyo ciyaar. Carruurtu waxay dhigtaan dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta isniin ilaa iyo jimco. Sabtiyada, axadaha iyo maalmaha fasaxa ah waa fasax.
Dugsiga hoose-dhexe waa waajib, lacag la'aan ayuuna dhammaan carruurta u yahay. Waa sida ugu caadi ahaansan in canuggu uu dugsiga billaabo dayrta sannadka uu 7 sano buuxinayo. Dugsiga hoose-dhexe wuxuu ka koobanyahay sagaal fasal. Sannad dugsiyeed kasta waxaa uu u qeybsanyahay laba xilli dugsiyeed, mid deyrta ah- iyo mid xilli dugsiyeedka guga ah.
Marka ay ku jiraan da'aaddan carruurta badankoodu waxay tijaabiyaan hawlo kala duwan oo xilliga firaaqada la qabto, waana muhiim in ay saaxiibbo la jiraan.
Haddii aad qabtid su'aalo ku aaddan horuumarka canugga waxaad la xiriiri kartaa caafimaadka ardayda.
Waxaa jirta caawimaad aad heli karto adigaaga doonaya inaad joojiso sigaarka. Talo-bixin iyo taageero weydiiso rugtaada caafimaadka. Adigu mar kastaba waxaad wici kartaa oo aad talo-bixinta xanuunka ka heli kartaa lambarka telafoonka ee 1177.
In la cabo khamri aad u yar maaha micnaheedu inaad noqonayso waalid xun. Laakiin waalidka oo khamri badan cabaa waxay raad xun ku yeelan kartaa ilmaha. Marka qofku cabo khamri waxaa xumaata awooda ah in laga warhayo baahida ilmaha. Waxaa xitaa jirta khatar weyn dhanka shil dhaca xilliga isticmaalka khamriga.
Waxaa jirta caawimaad aad heli karto adigaaga doonaya inaad wax ka badasho caadooyinkaaga khamriga. Caawimaad iyo talo-bixin ka raadso rugtaada caafimaadka. Adigu mar kastaba waxaad wici kartaa oo aad talo-bixinta xanuunka ka heli kartaa lambarka telafoonka ee 1177.
Da'dan marka lagu jiro waa iska caadi shilal in ay ka dhacaan goobaha isboortiga. Waa muhiim in canuggu uu isticmaalo difaac, sida tusaale ahaan koofiyadda madaxa dhawrta, marka uu jiro isboorti iyo hawlo u baahan taas.
Daryeelka canug xanuunsan (VAB) waa markaa adiga guriga la joogtid oo shaqo aadan aadin ama shaqo aadan raadin sidaa canug xanuun guriga kugu haysid.